Ukuchazwa okungaqondakali, kungani i-eyelashes ende iphupha, cha. Ngokusho kwezincwadi zaseNtshonalanga , ama-eyelashes anesimo sokwemvelo nesikhathi eside aphunduwe ngothando olulodwa olujabulisayo, ekuthandaneni okuhambisanayo, ezinsukwini zomshoshaphansi zothando.
Uma i-eyelashes ende ngesikhathi esisodwa kuyi-invoyisi, khona-ke lokhu kubonisa ukuthi maduze uzofunda izimfihlo zabanye abantu.
Uma i-eyelashes inomude kakhulu, hlangana ndawonye, ​​uphazamise iphupho ukuze ucabangele imininingwane, lokhu kusho ukuthi kufanele ufunde ngokusemandleni umuntu obuseduze - ngokoqobo "ubukeke emphefumulweni."
Ngokusho kwamaDreams aseMpumalanga , i-eyelashes ende idinga ukuqonda isimo sangaphakathi (yin) ngokubonakaliswa kwangaphandle (yang). Ngokungafani neYurophu, ukuhumusha okumpumalanga kunzulu futhi kujulile. Baxhomeke ezimweni zezokwelapha nezengqondo, uzizwa lowo muntu ngesikhathi elele.
Ama-eyelashes ama-long evulekile ekumelelweni kwamaShayina namaJapane anika ukujula nokubukeka njengokubukeka. Ngakho-ke, ephusheni, babonisa ngezinkinga ezikhulayo. Esikhathini sezokwelapha - lokhu kungukulimaza kwamapayipi, ukuphefumula ukuphefumula, isifo sofuba, njll. Esikhathini sengqondo, kubonisa ukungabi namandla okubalulekile, okweqile ngokweqile emsebenzini. Umuntu onama-eyelashes ende, udinga isihawu, uthando, ukuthula.
Uma, ngesikhathi esifanayo, ezwa imizwelo emihle ephusheni, khona-ke empilweni ngokushesha uzothola isihawu nothando kubathandekayo.
Uma ubheka ama-eyelashes amahle kakhulu, ahlanzekile kahle, ahlale eside ephusheni - lokhu yisibonakaliso esihle kakhulu. Ukhomba ngomfutho osondelene kakhulu oseduze nomlingani "omuhle".
Uma ephusheni uzwa usizi oluncane ngaphandle komqondo wenkinga ekhulayo, kanti empeleni kufanele ulindele ubuhlobo obusondelene obusondelene nomuntu othandekayo. Ngeke wamukele kuphela amandla akho othando, kodwa futhi ungayinikezi. Kubalulekile ukuhlola isimo samaphaphu.
Uma i-eyelashes ende enempilo iphunduwe ngumuntu okhubekile nowengozini, khona-ke empilweni yakhe umlingani oqinile uzovela maduzane. Ngemuva kwalokho, ngokwemibono yasempumalanga "yin" ihlanganiswe "yang". Kuhlanganiswa ibhangqa elihambelanayo, elihambisanayo.
Uma iphupho liyesabeka, futhi i-eyelashes ende ephusheni ivele iphumele phansi, iveza ngezinkinga ezinso, ngoba zithinta isimo sezinwele.
Yini ezoshintsha empilweni uma amaqanda ephupha
Geza ikhanda lakho ephusheni
Iyini leyo nto engayiphupha ngayo?
Indlela yokukhetha i-lashishisherhi nokuthi yini okufanele uyibuke
Diathesis ezinganeni - ukwelashwa
Indlela yokufundisa ingane ukulala egumbini lakhe
Kuhle ukuhalalisela ngevesi ngePhasika. Izinkondlo ezimfushane ukuhalalisela ngePhasika. I-Easter 2016 - Siyakuhalalisela amavesi angamaKristu
Obaba abakhulu phakathi kwamabhizinisi aseRussia abacebile kakhulu
Umthandi wangaphambili u-Xenia Borodina wabonisa i-idyll nomkakhe
Ukuthuthukiswa kwengane ngenyanga yesihlanu yokukhulelwa